इन्द्रजात्रामा फेरिँदो शैली- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
इन्द्रजात्रामा फेरिँदो शैली
आश्विन १, २०७६ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — झोंछेकी पुनम शाक्यले यस पटकसहित इन्द्रजात्राको रथ ३ पटक तानिन् । इन्द्रजात्राका बेला कुमारी, श्रीभैरव र श्रीगणेशको रथ ३ दिन तानिन्छ । त्यसमध्ये पुनमले कुमारीकै रथ तानिन् तीनै पटक । ‘साक्षात भगवान्को दर्शन गरेजस्तो अनुभूति हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘भगवान् भेट्दा ऊर्जा मिलेजस्तो । शक्ति मिलेजस्तो आभास हुन्छ । जीउ नै त्यसै फूर्तिलो भएर आउँछ ।’
इन्द्रजात्राको अन्तिम दिन काठमाडौंको वसन्तपुरमा जीवित देवी कुमारीको रथ तानिँदै । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर
इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिले रथ तान्नेलाई टिसर्ट दिन्छ । टिसर्ट लगाएर रथ तान्ने महिला इन्द्रजात्राको विशेष आकर्षण हुँदै गएका छन्, ७ वर्षयता । परम्परागत रूपमा रथ तान्नेले सिकाउने गर्छन् । कसरी हिँड्ने, कसरी तान्ने भनेर सिकाइन्छ । ‘हिँड्दा गोडा घिसारेर हिँड्नुपर्छ । उचालेर हिँड्यो भने मान्छेलाई कुल्चिन्छ,’ शाक्य भन्छिन्, ‘डोरी तान्दा पनि होस् गर्नुपर्छ ।’ नेवार समुदायमा इन्द्रजात्रा ‘येंया’ भनेर चिनिन्छ । नेपाल भाषामा ‘येंया’ भनेको काठमाडौंको जात्रा हो । येंया: को अन्तिम दिन नानिचा या: नामले प्रसिद्ध छ ।
थपिएको कुमारी यात्रा
वैदिककालदेखि नै देवताका राजाका रूपमा विशेष सम्मान थियो इन्द्रको । नेपालको इतिहासको प्रारम्भदेखि नै इन्द्रको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको वज्राचार्य बताउँछन् । लिच्छविकालीन अभिलेखमा पनि इन्द्रयात्राको उल्लेख छ । त्यस हिसाबले इन्द्रजात्रा प्राचीन हो । यो यात्रा चलाउन इन्द्रगोष्ठी नामको गुठी भएको लेलेको अभिलेखमा उल्लेख छ । वज्राचार्यका अनुसार पन्ध्रौं शताब्दीमा इन्द्रजात्रा निकै लोकप्रिय भइसकेको थियो । वज्राचार्यका अनुसार कुमारीयात्रा पनि मल्लकालमै इन्द्रजात्राको एक अंगको रूपमा विकसित भएको हो । ‘इन्द्रजात्रा परापूर्वकालदेखि थियो, ‘इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरदकुमार डंगोल भन्छन्, ‘कुमारीयात्राचाहिँ मल्लकालमा थपियो । अहिले इन्द्रजात्राको मुख्य आकर्षकणको रूपमा यही कुमारीयात्रालाई लिइन्छ ।’
य: सिं ठड्याइएकै दिनबाट देगुतलेजु मन्दिरमा रहेको श्वेत भैरव प्रदर्शन गरिन्छ । श्वेत भैरव प्रदर्शन गर्ने परम्परा रणबहादुर शाहको पालामा भएको मानिन्छ । यहाँ हरेक साँझे श्वेत भैरवको मुखमा टुटी राखेर बनाइएको ठाउँबाट प्रसादको रूपमा जाँड बगाइन्छ । जाँड मुखमा पार्न भीड लाग्छ । मन्दिर अगाडि मञ्च बनाएर भैरव प्रदर्शन गरिन्छ ।
हरेक टोल उत्सवमय बनेको हुन्छ यो बेला । टोल टोलमा माटो, काठ र धातुबाट बनेका भैरवका मूर्ति राखिएका हुन्छन् । प्रदर्शनीमा राखिएका भैरवमध्ये इन्द्रचोकको आकाश भैरव प्रसिद्ध छन् । मन्दिरभित्र राखिएका भैरवलाई बाहिर खटमा राखेर इन्द्रजात्राभरि प्रदर्शन गरिन्छ । दर्शन गर्न भक्तजनको भीड लाग्छ यहाँ । शिवपार्वती डबली छेउकै कडेलचोक भगवती मन्दिरमा पनि भैरव प्रदर्शन गरिन्छ । यहाँ प्रदर्शन गरिने मूर्ति आनन्द भैरवको हो । आनन्द भैरवको पादपीठमा अभिलेख छ । अभिलेखमा इन्द्रजात्रामा प्रदर्शन गर्नुपर्ने मूर्ति भनेर लेखिएको छ ।
य: सिं ठड्याउने बेलाको निकै रौनक हुने गर्थ्यो । य: सिं ठड्याउने बेलामा राजाको समेत सवारी हुन्थ्यो । राजतन्त्र छँदै यो परम्परा लोप भइसकेको थियो । वज्राचार्यका अनुसार यो रौनक घटेको छ । पहिला ठड्याएपछि हरेक रात प्रधानमन्त्री हाजिर हुन्थे । य: सिं नढालेसम्म दरबारका भारदार पनि हाजिर हुने प्रचलन थियो । भारदार रातभर जाग्राम बस्थे । यो चलन हरायो । रातभर विभिन्न नाच देखाइन्थ्यो । यो बेला नाचिने नाचमध्येमा भँडिनीको नाच प्रसिद्ध थियो । भँडिनी नाच शृंगारिक रसले भरिपूर्ण हुन्थ्यो ।
मल्लकालमा प्रसिद्ध भएका केही नाच शाहकालमा हराए । इन्द्रजात्रामा सयभन्दा बढी नाच देखाइन्थ्यो । ती नाचको बन्दोवस्त सरकारले गर्थ्यो । अहिले पनि यीमध्ये अधिंकाश हराएका छन् । हनुमानढोका दरबारभित्र इन्द्रजात्राकै अवसरमा कृत्रिम युद्ध प्रस्तुत गरिन्थ्यो । शत्रुको किल्लामा आगो लगाइदिने युद्ध देखाइन्थ्यो इन्द्रजात्राको अवधिमा । खटजस्तो गरी नक्कली किल्ला बनाइन्थ्यो । वज्राचार्यका अनुसार किल्लामा विपक्षीले आगो लगाइदिने दृश्य हुन्थ्यो । युद्धको प्रतिकार गर्न पनि बसेको हुन्थे जात्रामा सहभागी हुनेहरू । यस्तो युद्धमा मानिस घाइतेसमेत हुने गरेका थिए । मल्लकालमा यो युद्ध निकै प्रसिद्ध थियो । विस्तारै हरायो यो पनि । जाँड खुवाएको राँगोसँग युद्ध लड्ने चलन पनि प्रसिद्ध थियो ।
जाँड खुवाएर मत्याएको राँगोलाई मैदानमा छाडिन्थ्यो । भैरवको मुखुन्डो लगाएका व्यक्ति राँगोसँग जुध्न जान्थे । मत्याएको राँगोसँग केही बेर युद्ध चलेपछि बलि दिने गरिन्थ्यो । यो चलन पनि हरायो ।
अहिले प्रदर्शन गरिने नाचमध्ये लाखे, पुलुकिसि, भैरव र सव:भक्कुको नाच प्रसिद्ध छन् । कुमारी रथ तान्ने बाटो लाखे र पुलुकिसि नाचिरहेका हुन्छन् । पुलुकिसि हात्तीको रमाइलो नाच हो । यसलाई नेपालभाषामा पुलुकिसि प्याखं पनि भनिन्छ । हात्ती इन्द्रको बाहन हो । भकारी र काठ मिलाएर बनाएको हुन्छ हात्ती । इन्द्र स्वर्ग जाँदा हात्तीलाई चाहिँ किलागलमा बाँधे छाडेर गए । हालको घना बस्ती किलागल त्यतिबेला घना जंगल भएको विश्वास गरिन्छ । त्यही बाँधेको हात्ती इन्द्रजात्रामा आफ्ना मालिक इन्द्रलाई यताउता खोज्दै हिँडेको विश्वास गरिन्छ । भकारी र काठबाट बनाइएको विशेष हात्तीभित्र दुईजना बस्छन् । प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०९:४१
सत्यमोहनलाई पृथ्वी प्रज्ञा
काठमाडौँ — नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले चार–चार वर्षमा प्रदान गरिँदै आएको ‘पृथ्वी प्रज्ञा–पुरस्कार’ यसपटक वाङ्मय शताब्दी पुरुष एवं संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई दिने भएको छ । चार लाख रुपैयाँ रहेको पुस्तकार मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न ३४ औं प्राज्ञसभामा घोषणा गरिएको हो ।
यसैगरी, प्रतिष्ठानले विभिन्न प्रज्ञा पुरस्कारहरूको घोषणा गरेको छ । दुई–दुई वर्षमा प्रदान गरिने नेपाल प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र, संस्कृति तथा दर्शनशास्त्र पुरस्कार प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धरलाई, नेपाल प्रज्ञा नेपाली भाषा पुरस्कार प्र्रा.डा. टंकप्रसाद न्यौपानेलाई, प्रत्येक एक–एक वर्षमा प्रदान गरिने नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार मदन रेग्मी र भागिरथी श्रेष्ठलाई प्रदान गरिने भएको छ । त्यस्तै पहाड, हिमाल क्षेत्रमा बोलिने मातृभाषा साहित्यतर्फ अमर तुम्याहाङ र अमृत योञ्जन तामाङ, तराई मधेसमा बोलिने मातृभाषाका साहित्यतर्फ अयोध्यानाथ चौधरी र अशोक थारूलाई दिइने भएको छ । यी पुरस्कारमा जनही १/१ लाख रहेको छ ।
प्रतिष्ठानले अन्य तीन पुरस्कारसमेत स्थापना गर्ने सभाले निर्णय गरेको छ । नेपालबाहिर रहेर नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान गरेका नेपाली मूलका स्रष्टालाई प्रत्येक दुई वर्षमा दिइने गरी ‘नेपाल प्रज्ञा अन्तरदेशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार’, नेपाली भाषाबाट विदेशी भाषामा र अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवादका माध्यमबाट विशिष्ट योगदान गरेका स्रष्टालाई दिइने गरी ‘नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार’ स्थापना गरेको हो । यी पुरस्कारमा पनि जनही १/१ लाख रुपैयाँ रहने कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले जनाए । यसैगरी अध्ययन र अनुसन्धानका माध्यमबाट नेपालबाट नेपालको गौरवलाई विश्वमा चिनाउन विशिष्ट योगदान गरेका विदेशी विद्वान्लाई तीन तीन वर्षमा दिइने गरी तीन हजार अमेरिकी डलरको ‘नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार’ समेत स्थापना गरिएको छ ।
राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न प्राज्ञसभाको उद्घाट संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले गरेका थिए । उनले भाषा, साहित्य र संस्कृतिसित मुलुकको पहिचान जोडिने भएकोले सरकार यी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सदैव कटिबद्ध रहेको बताए ।
प्रकाशित : आश्विन १, २०७६ ०९:३९